Taageerayaasha Barcelona oo ‘Ronaldo ku tilmaamay Aalkoleyste’ | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Taageerayaasha Barcelona oo ‘Ronaldo ku tilmaamay Aalkoleyste’
Barcelona iyo taageerayaashooda ayaa wajihi doona ciqaab ay kala kulmaan xiriirka LFP kadib markii tageerayaashooda ku qeyliyeen ereyo ka dhan ah laacibka Real Madrid Cristiano Ronaldo intii ay socotay kulankii 5-0 kaga badiyeen Levante oo ka dhacay Camp Nou.
sida ay sheegayaan Spain Professional Football League authority (LFP), taageerayaal fadhiyey qeybta Koofureed ee Camp Nou ayaa ku hadaaqayey “WAA CABTOOY, Cristiano WAA AALKULIISTE!” daqiiqadii 65thaad ,waxaana ay uga gol’lahaayeen dhacdadii laacibkaxulka Portugal ee ugu dabaal-degayey dhalashadiisa 30th saacado kadib guul daradii soo gaartay kooxdiiisa Madrid.
Xiriirka ayaa sidoo kale sheegay iney baaritaan ku sameeynayaan ereyo aqlaaqda ka fog oo ka dhacay kulamadii ay yeesheen Sevilla-Cordoba iyo Albacete-Betis iyo kooxdan Barca oo wax laga weydiin doono sababta ka danbeesay aflagaado loo geystay laacibkaasi.
Ronaldo ayaa horey u cadeeyey inuusan cabin Alcoholka,laakiin xafladii dhalashadiisa saacado yar kadib guul daradii 4-0 ee Atletico Vicente Calderon ayaa la arkayey caagaga qamriga oo meesha ku camirnaa.